नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : के नेपाली जनता आतंक सहन र चन्दा दिन, लुटिन, कुटिन, अपहरित हुन, मर्न मात्र जन्मेका हुन त ??
के नेपाली जनता आतंक सहन र चन्दा दिन, लुटिन, कुटिन, अपहरित हुन, मर्न मात्र जन्मेका हुन त ??
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को नेतृत्वमा गठन भएको नवठित नेकपा माओवादीले चन्दा अभियान सुरु गरेको छ । उक्त पार्टीले ‘क्रान्तिका लागि’ भन्दै देशभर चन्द संकलन अभियान थालेको हो । माओवादी कार्यकर्ताले राजधानीसहित देशैभर उद्योगी–व्यवसायीलाई चन्दा लिन आग्रह गर्दै पत्र दिएका छन् । पत्रमा विप्लव आफैंले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर पत्रमा रकम तोकिएको छैन । स्रोतका अनुसार हरेक राज्य समितिबाट १२ करोड र राजधानीबाट मात्र ३० करोड चन्दा संकलन गर्ने योजना उक्त पार्टीको छ । माओवादीका १४ राज्य समिति छन् ।